Xildhibaannada [Kutladda NISA] oo waagu ku baryay | KEYDMEDIA ENGLISH
Xildhibaannada [Kutladda NISA] oo waagu ku baryay
Xildhibaanada Baarlamaanka kasoo galay NISA ayaa ku bahoobay kutlad cusub, waxa ayna garab istaag u muujiyeen eedeysane Fahad Yaasiin oo kursigii uu kusoo baxay ilaa hada lagu dhegan yahay, hayeeshee qorshahoodii ma hirgalin.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaannada sanadkaan dhanka Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ka soo galay Baarlamaanka 11-aad, ayaa waagu ku baryay saacado ka hor, kadib markii ay ogaadeen in Xildhibaannada Koofur galbeed, maanta imaanayaan Muqdisho si ay u qaataan shahaadad Xildhibaannimo lana dhaariyo.
Xildhibaannada dhanka NISA, ka yimid oo aan 10 ka badneyn, ayaa sameystay kutlad u gaar ah, waxayna diideen in ay qaataan shahaadada, iyagoo garab istaag u muujinaya, taliyahoodii hore Fahad Yaasiin, oo laga hor istaagay ansixinta kursi uu ka soo boobay Baladweyne, hayeeshee, hadda kaligood ayaa meel cidlo ah ku soo dhacay.
Guddiga Doorashooyinka ayaa dhagaha ka fureystay rafashada eedeysane, Fahad Yaasiin ku doonayo in loo aqoonsado Xildhibaan, waxayna xalay ku dhawaaqeen in xal laga gaaray saddexdii kursi ee la xayirneyd kursiga Fahad, taasoo la micno ah in uusan qeyb ka noqon doonin, xubanaha Baarlamaanka 11-aad ee maanta la dhaarinayo.
Sidoo kale, Kutladda NISA, oo rumeysneyd in ay qeyb ka qaadan karaan, dib u dhigidda dhaarinta Xidhibaannada, ayaa kaligood ka maqnaan lahaa xafladda hadda ka socota Teendhada Afisyooni, hayeeshee, maanta ayay ku qasbanaadeen in ay qaataan shahaadada, si aysan uga harin doorashada Guddoonnada iyo Madaxweynaha.
Kaliya 139 Xildhibaan ayaa loo baahan yahay, si loo doorto, Guddoonka Golaha Shacabka, sida uu dhigayo qodobka 65aad ee dastuurka, halka Guddoonka Aqalka sare, ay dooran karaan 28 Senator, sida uu qabo qodobka 73aad ee dastuurka, sidaas oo ay tahay waxaa hadda diyaar ah, ku dhawaad 300 oo xildhibaan.
Ma jirto cid daneyneysa, Xildhibaanada NISA kasoo galay Baarlamaanka, inta dhiman ayaana ku qasban in ay doontan shahaadada si loo dhaariyo, ka hor Cumrada, maadaama wixii berri ka danbeeya inta badan Xildhibaannada Guddiyada iyo Siyaasiyiintu u socdaalayaan Sucuudiga si ay u soo cumreystaan.